ကွန်ပျူတာနည်းပညာ (လမ်းပြကြယ်): Myanmar3 unicode Installation
Bagan Net IP ချိတ်ဆက်နည်း
CC Proxy အသုံးပြုနည်း
Secret to G-mail
Domain Name နှင့် Website
Zaw Oo မှတ်စုများ
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ Websites များ
မြန်မာ IT နည်းပညာဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး
နည်းပညာတို့ရဲ့ ဆုံမှတ်များ (ကိုမြတ်)
ဆရာကျောင်း ( Multiply )
rounter setting ထဲဝင်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် (ညီနေမင်း)
Myanmar Multiply Group (ကိုကြည်နိုင်၊ ကျုံတိုင်းရွာ)
HTLM နှင့် CSS လေ့လာရန်လမ်းညွှန်
G talk အမြန်ဖွင့်နိုင်တယ်
Multiply Group SayarKyaung (ကိုကြည်နိုင်၊ ကျုံတိုင်းရွာ)
CO.CC ထံမှ domain name တစ်ခုရယူခြင်း
Google Search Engine နဲ့ရှာမယ်
ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းကို အရင်ဦးစွာဖတ်ရှုပါ.. ပြီးမှ အောက်ကဆွေးနွေးချက်
လက်ရှိ update ဖြစ်တဲ့ Myanmar3 font ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Control Panel/Fonts folder ထဲကို သွားထည့်ပါ။ ပြီးရင် အက္ခရာကီးဘုတ်ကို အောက်က လင့်၂ ခု မှာ သက်ဆိုင်ရာ ၀င်းဒိုးအလိုက် ဒေါင်းလုဒ်ယူပြီး Install လုပ်ပါ..။
32bit windows များအတွက်
64bit windows များအတွက်
မြန်မာ အိုင်တီနည်းပညာဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဘလော့မှ
Posted by Naing Tun Oo at 5:27 AM
Labels: Myanmar3 unicode Installation, နည်းပညာမျှဝေခံစားမှု
<<<< မင်္ဂလာပါ >>>>
လမ်းပြကြယ် ဘလော့မှ ကြိုဆိုပါ၏
သင်ကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့သောသမိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
(Internet page load faster) (1)
(speed up Internet) (1)
(Zawgyi-one For Firefox Browser) (1)
Auto Run ပိတ်နည်း (1)
Crack File ရှာနည်း (1)
Desktop ပေါ် rightclickထောက်လိုက်တဲ့အခါ Control Panel သို့သွားရန်ပြင်ဆင်ခြင်း (1)
Firefox ကိုပိုပြီးမြန်အောင် confinguration လုပ်ခြင်း (1)
G-mail Hacking (1)
G-talk hack (1)
How to use Zawgyi on the G-talk (1)
Microsoft Access Database 2007 စာအုပ် (1)
Mobile Phone မလိုဘဲ gmail account ဖွင့်နည်း (1)
Myanmar3 unicode Installation (1)
Windows7Short Cut Keys (1)
Windows အတက်မြန်စေချင်ရင် (1)
ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံနှင့် Video record လုပ်မယ် (1)
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာလေ့လာဖို့ မြန်မာ E-book download link များ (1)
ကိုယ့်ရဲ့ Website ထဲမှာ အဖြူရောင်သံစဉ်ထည့်ထားချင်ရင် (1)
မြန်မာ E-Book တွေရှိတဲ့နေရာ (2)
အသုံးဝင်တဲ့ Windows7shortcut key များ (1)
ကောင်းနိုးရာရာ website အညွှန်းလေးများ (1)
Buddha တရားတော် Mp3, WMV, E-Book တွေစုစည်းထားတဲ့နေရာ
တရားတော်များ၊ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များ၊ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
တရား၊ ဓမ္မနဲ့ပက်သက်တဲ့ Website
Buddha FM & Dhamma Video Website
ဆရာတော်အရှင်ဆေကိန္ဒ(ဓမ္မဒူတ)တရားတော်များ Myanmar MP3 Album
အဖြူရောင်သံစဉ် Online Radio
ထားဝယ် Hero များ
Software for you (ဇော်ရဲ)
Crack File ရှာနည်း
အသုံးဝင်တဲ့ Windows7shortcut key များ
Desktop ပေါ် rightclick ထောက်လိုက်တဲ့အခါ Control Pa...
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာလေ့လာဖို့ မြန်မာ E-book download ...
Windows7Short Cut Keys
ကိုယ့်ရဲ့ Website ထဲမှာ အဖြူရောင်သံစဉ်ထည့်ထားချင်ရ...
Microsoft Access Database 2007 စာအုပ်
စူးရှတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံရဲ့ အကြည့်နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်အရာတွေရှိမယ်ထင်လဲ ကိုယ်မမှန်းဆရဲပါဘူး။ အကြိမ်ကြိမ်ရင်ခုန်ခဲ့ရတဲ့ ဒီမျက်ဝန်းတွေကို ပိုင်ဆ...
ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ကြောင်း ၀န်ခံပါရစေ။ Data base ကို လေ့လာလို သောသူငယ်ချင်းများအားလုံး ဒီစာအုပ်လေးနဲ့အဆင်ပြေပါစေလို့ ....
ချစ်ခြင်းဟူသည် အချစ်စစ်က အချစ်မှန်လျှင် တန်ဖိုးရှိစမြဲ။ ချစ်ခြင်းဟူသည် အကြည့်တစ်ချက် မျက်ဝန်းတစ်စုံ ထိုလောက်နှင့်လည်း လေးနက်တတ်...
ကောင်းနိုးရာရာ website အညွှန်းလေးများ
http:// http://www.zwani.com/ ပုံလှလှလေးတွေ လိုချင်ရင် http://: http://myanmaritpros.com/ ကွန်ပျူတာ အမေးအဖြေများလေ့လာရန်…. http://www....
Window7မှာအတော်အသုံးဝင်တဲ့ shortcut လေးတွေပါ။ Win + D = Window ကိုပြသခြင်း (သို့) ဖုံးကွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်မည် ။ ...
အင်တာနက် Speed ကိုမြှင့်တင်ရအောင်
Speed Up Internet နေ့ခင်းဘက်တွေမှာ မြောက်များလှစွာသော အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကြောင့် ကွန်နက်ရှင် ကျဆင်းသွားပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းများစွာရှိေ...
အခု Auto Run ပိတ်နည်းလေးကိုပြောပြပါမယ် .. ၊ ကဲ .. ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို Group Policy ကနေ၀င်ပြင်ပါမယ် ၊ Run Box ကနေ gpedit.msc လိ...
အလွမ်းကဗျာ..... ချစ်သူ... မြတ်နိုးခြင်းတွေ..တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်... လေညင်းလေးနဲ့ ပို့လိုက်တယ်... ချစ်သူခံစား.. လွမ်းဆွတ်မှုတွေ ပြေစေသားက...
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာလေ့လာဖို့ မြန်မာ E-book download link များ
G-talk နဲ့ပက်သက်တဲ့စာအုပ် http://www.mediafire.com/?ememzwhndzm = Gmail ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေသိချင်ရင် http://www.mediafire.com/?noziemy...
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာလေ့လာလိုသူများအတွက် E-Book တွေရှိတဲ့နေရာ
ကွန်ပျူတာနည်းပညာရပ်များကို လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် မြန်မာလိုရေးသားထားတဲ့ E-Book စာအုပ်တွေရှိတဲ့ နေရာကိုကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပြပေးထားတာပါ။ အဆင...
မိမိရေးထားသောစာကို mp3 ဖိုင်ပြုလုပ်နည်း
People သတင်းစုံ Website
သစ်ထူးလွင် Myanmar New Now
ကွန်ပျူတာ anti virus software များ
Kaspersky Anti Airus Software
ရုပ်သံ နှင့် သီချင်း Website များ
ရေဒီယို FM သီချင်းများနားဆင်နိုင်သည်
မြန်မာ flagsong website
မြန်မာ Mp3 သီချင်းပေါင်းစုံ
အင်တာနက် ICT Reader သတင်း ဂျာနယ်
FLAGS COUNTER, william hill casino, webtrader, Poker, online casino england
ပညာရေး Web Site များ
IELTS, TOEFL, GMAT, SAT, GRE စာမေးပွဲတွေအတွက်
ဂြိုလ်တုနဲ့ပက်သက်သော web site များ
ဂြိုလ်တုစလောင်း TV ကုတ်နံပါတ်ရှာနိုင်သည်
လမ်းပြကြယ် ဘလော့မှ နှူတ်ခွန်းဆက်သပါ၏